Muzvare Marry Mubaiwa Vanosungwa Zvakare
Kukadzi 01, 2020
Marry Chiwenga, center, arrives at Harare Magistrate Court, in Harare, Zimbabwe, Dec. 16, 2019. (Columbus Mavhunga/VOA)
Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Va Constantino Chiwenga, Muzvare Marry Mubaiwa, vasungwa neMugovera vachipomerwa mhosva yekurova mushandi wavo, Muzvare Delight Munyoro, apo vaida kutora vana kubva kwavari ivo Muzvare Mubaiwa pavakasangana pachikoro chinopinda vana ava paHellenic School, kuBorrowdale.
Izvi zvinonzi zvakaitika nemusi weChipiri.
Muzvare Mubaiwa vamiswa pamberi pedare, asi havana kupihwa mukana wekubvisa mari yechibatisomushure mekunge muchuchisi wenyaya audza dare kuti havafanirwe kupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vakapihwa mumwe mukana wakadai pamwe mhosva yekushandisa mhirizhonga yavakatarisana nayo.
Kunyange hazvo magweta avo anzi apikisa zvakasimba panyaya iyi, Muzvare Mubaiwa vaendeswa kujeri rekuChikubi, uye vari kutarisirwa kumira zvalare mudare musi wa 15 Kukadzi.
Studio7 yaedza kunzwa kugweta raMuzvare Mubaiwa, Va Taona Nyamakura, asi vanga vasiri kudaira nharembozva yavo.
Asi baba vaMuzvare Mubaiwa, Va Kenny Mubaiwa, vanoti ichokwadi kuti mwana wavo aendeswa kuChikurubi Remand Prison.
VaMubaiwa vanoti vachaenda kunopikisa nyaya iyi kudare repamusoro sezvo mwanasikana wavo aine kodzero yekupihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva dzakaita seyaari kupomerwa.
Muzvare Mubaiwa vakasungwa muna Zvia gore rapera vachipomerwa mhosva dzakati kuti, idzo dzinosanganisira kuda kuuraya murume wavo uyu wavari kurambana naye mumatare edzimhosva, kuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo, pamwe nekufojera gwaro remuchato.
Asi Muzvare Mubaiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Dare redzimhosva rakavabhadharisa mari yechibatiso kuitira kuti vatonge vachibva kumba kwavo.
Hurukuro naVaKenny Mubaiwa